I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kwabaNtu kwiNqaku le-Untold Biography yeNqaku
Ikhaya UMPHATHI weFOOTBALL I-Freddie Ljungberg Ibali lomntwana i-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius ngegama lesidlaliso "UFreddie". Ibali lethu leFreddie Ljungberg yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lobuntwana bakhe ukuza kuthi ga ngoku.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba wayelilolo Intsumpa yase-Arsenal kwaye imodeli yangaphantsi Ngubani ngexesha lokubhala, Unyukile ukuba abe ngumqeqeshi oyintloko wexeshana eArsenal Unai Emery isaka. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abaqwalasele inguqulelo yethu yeFreddie Ljungberg's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imvelaphi yoSapho kunye noBomi baKudala
Ukuqala, amagama akhe agcwele UKarl Fredrik “Freddie” Ljungberg. UFreddie Ljungberg njengoko ebizwa ngokudumileyo wazalwa ngomhla we-16th ka-Epreli 1977 kunina, u-Elisabeth Bodil Ljungberg kunye noyise, uRoy Alve Erling Ljungberg, eSweden, eNtshona Yurophu.
UFreddie unosapho lwakhe oluvela kumasipala omncinci waseSweden obizwa ngokuba yiVittsjö (Abemi be1,665 kwi2010). Uchithe iminyaka yokuqala ye-4 yobomi bakhe kwindawo yakhe entle yokuzalwa yeVittsjö ecaleni kwabazali bakhe kunye nomntakwabo womntwana ogama lingu UKarl Oskar Filip Ljungberg.
UFreddie Ljungberg uchithe iminyaka yakhe yokuqala eVittsjo. Kwityala: QX Sveriges största Gaysajt
IVittsjö ngumasipala waseSweden owaziwayo kwimbali ukuba yindawo yemfazwe phakathi kweDenmark, iNorway neSweden eyayilwela ukubanga ubunini bayo. Ubusazi?… Kwakumanzi eVittsjö ethoba isithsaba iKing Sweden UGustavus Adolphus phantse ndatshona ngelixa ukubuya Danish imikhosi. Ngoku, Yanele imbali !!
Imvelaphi Yentsapho: UFreddie, ngokungafaniyo Zlatan, waba nethamsanqa lokukhula kwintsapho ekumgangatho ophezulu. Ubusazi?… Utata wakhe URoy Alve Erling yinjineli yesityebi yaseburhulumenteni eyathi kamva yaya kuba neyayo ishishini lokwakha kunye nelokucebisa. Umama kaFreddie Ljungberg ka-Elisabeth Bodil Ljungberg ukwindawo enkulu yokudubula kwiCandelo lezabaSebenzi laseSweden.
Emva kokuhlala kwiminyaka yeVittsjö 5, ngonyaka we-1982, abazali bakaFreddie Ljungberg bashiya umasipala bayokuzinza eHalmstad, isixeko esityebileyo esisemilanjeni yomNissan, kunxweme lwasentshona. Imizamo yosapho yokushiya indawo awazalelwa kuyo uFreddie eVittsjö ayizange ihambe kakuhle UFreddie Ljungberg. Umntwana oneminyaka elishumi ubudala u-5 oneminyaka eli-12 ubudala owayethandane nendawo yakhe yokuzalwa wayengafuni ukuba usapho lonke luphume kwidolophu yaseHalmstad. Uxabene nabazali bakhe abazizityebi abangazibonanga izizathu ezininzi zesigqibo sakhe sokuhlala ngasemva. Bambopha bemka naye kude neVittsjöall yonke indlela eya eHalmstad. Emva kwexesha ebomini bakhe, uFreddie wabona umzi kulapho ikamva lakhe labekwa phantsi
Ukushiya iVittsjo ukuya kwisixeko esikhulu saseHalmstad kwaba sesona sigqibo sihle kakhulu senziwa ngabazali bakaFreddie Ljungberg. Ityala lemifanekiso: Pinterest
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
IHalmstad ibisisixeko saseSweden esithanda kakuhle ukuqubuda, igalufa, umthambo, ibhola, ukubhukuda, itenesi, i-ice hockey, ikhilikithi kunye neminye imidlalo. Ngexesha lokufunda aUmntwana, uFreddie wakhulisa italente yebhola yesandla. Yafika kwinqanaba apho italente yakhe yebhola yomnyazi yamkelwa liqela lesizwe leSweden Handball, uphuhliso olwabona uFreddie ebizelwa ukumela ilizwe lakhe. Ukothuka, awala umniki enyanzelisa umdla wakhe kuphela kwibhola ekhatywayo.
UFreddie akakwazanga ukumelana nebhola phakathi kwezinye iindlela zemidlalo. I isityebi somntwana wakwazi ukubetha ibhalansi phakathi kwebhola kunye nokufumana amanqaku amahle.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
KaFreddie Ljungberg's abazali abaze bathoxe kwilinge lokubona unyana wabo ezalisekisa amaphupha akhe ezemidlalo. Bayixhasa kumnqweno wakhe wokufumana imfundo yebhola kunye neHalmstads BK apho wayenobhaliso oluyimpumelelo kunye neklabhu yolutsha yokuqeqeshwa eqeqeshwa ngu-Olle Eriksson.
UFreddie Ljungberg Iminyaka yaKudala ngeHalmstad. Ityala: Arseweb
UFreddie Ljungberg wakhawuleza wenza umbono neklabhu. Uye wachukumisa umqeqeshi wakhe wolutsha U-Eriksson owakha wathi inkwenkwe ibinetalente ebalaseleyo kwiminyaka yayo. Inkwenkwezi yokuzalwa yaseSweden yayilungile kangangokuba ngamanye amaxesha yayiza kuba nolwazelelelo lwabanye abadlali kwaye ngamanye amaxesha, nkqu nabamelene nayo. Ubusazi?… omncinci uLjungberg kowakhe ubungangamsha ngamanye amaxesha ebeya kudlulisa ibhola kubahlobo bakhe ukuze babe nethuba lokufumana amanqaku.
Kwiminyaka ye-12 ngonyaka Kwi-1989, wayesele elibona njengekamva lebhola laseSweden. Kwiphulo lokukhawulezisa uFrack ngenkqubela yakhe, uFreddie wazama ukweyisela uHalmstads BK ukuba amshukumise amanyathelo amabini aphezulu kuluhlu lwabaselula (ukusuka kwi-p12 ukuya kwi-p14) eyayichasene nomgaqo-nkqubo weklabhu ngelo xesha.
ILjungberg ngelixa yayidlala ibhola kunye neHalmstads BK nayo yayiphezulu kwizifundo zayo. Wenza kakuhle kwizifundo zemfundo, egqiba ibanga le-9th. Ubusazi?… Amabanga akhe esikolo aphawula i-4.1 ephakathi kumgangatho wenqaku le-5.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Akabinakuba nguJack wawo onke amaBanga Kwi-18, iLjungberg sele yenziwe nesikolo samabanga aphakamileyo kwaye yayikwinqanaba lokuphelisa ibhola yakhe yobutsha. Nokuba yayilixesha ebomini bakhe elalifuna ingqalelo eyodwa kwinkqubela phambili, uLjungberg owayenolwazelelo wayesafuna ukuqhubeka nemfundo yaseyunivesithi nokudlala ibhola ephezulu. Ngapha koko, wamkelwa eyunivesithi apho waqala khona ukufunda itekhnoloji yeenkcukacha kunye noqoqosho.
Kungekudala, iLjungberg yaqalisa ukunxiba. Waqonda ukuba wayengengomntu onokuthi ajonge zombini uxinzelelo lweyunivesithi kunye nebhola ephezulu ngexesha elinye. Uye wazabalaza ngamandla ukuba abambe ibhalansi phakathi kwexesha lakhe lokufunda kunye nokuzibophelela okunyanzelekileyo wokuba ngumdlali webhola ophambili. Emva kokubonisana namalungu osapho, i-workaholic yagqiba ekubeni iyeke iyunivesithi ukuze igxile kwibhola ekhatywayo.
I-Ljungberg emva kokuyeka imfundo yakhe yaseyunivesithi yaqhubeka nokwenza i-dut yakhe ephezulu kwi-23 ka-Okthobha ngo-1994. Ngonyaka omnye kwityala lakhe lobungcali, umSweden owayenetalente waqalisa ukubonakalisa abaqeshi bakhe. Uye waqhubeka nokunceda uHalmstad ukuba aphumelele iSvenska Cupen kwi1995 kunye neAllsvenskan (isihloko saseSweden sobuchule beligi) kunyaka we-1997.
UFreddie Ljungberg uphumelele iintliziyo zabaqeqeshi bakhe ngelixa laseHalmstad. Ityala lemifanekiso: Flickr
Indima kaFreddie ebabazekayo yokuphumelela umdlalo weligi waseSweden wabona iqela leeklabhu zangaphandle; izinto ezithandwa yi-FC Barcelona, ​​iChelsea, iAston Villa, iParma kunye neArsenal yonke ecela ukuba atyikitye.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Kubo bonke abaqeqeshi, yayikho Arsène Wenger, (Unjingalwazi onobuqili) othathe inyathelo elingaqhelekanga lokugunyazisa ukusayinwa kukaFreddie (i- £ 3m) ngaphandle kokumbona edlala bukhoma. UWenger wayebukele iLjungberg kumabonwakude kuphela kodwa wothuka akubona Inkwenkwe ebomvu ye-spiky ebomvu ebebonakala ngathi UJohnny Ubolile ukujoyina iqela lakhe.
ILjungberg ngela xesha azibonakalisi ukuba uneArsenal ngaphandle kobunzima njengoko waqalisa ukubhabha ezantsi kwamaphiko e-Highbury. Akuzange kuthathe xesha ngaphambi kokuba akhameIqhawe lenkcubeko kwiklabhu. UFreddie ulonwabele ubudlelane obukhulu kunye Thierry Henry kwaye nenkitha yezinye izinto ezinkulu ezazihlawula kwangoko ukusukela nje ukujoyina iklabhu.
Umzuzu omnandi kaFreddie weArsenal weza xa wayenceda iklabhu ukuba iphumelele iNkulumbuso yesibini kunye neNdebe ye-FA kabini kwaye, eyinxalenye yeArsenal 2003-04 'Izihluzi'I-squad, ngokubaluleke ngakumbi, inkwenkwe yegolide yeArsenal yayibamba irekhodi le-2001 / 2002 Premier League Player yeBhaso leBhaso.
Ngexesha lokuthatha umhlala-phantsi, inqaku le-Arsenal laliphumelele imbali yaseSweden yonyaka amaxesha e-5 ngokulandelelana (I-2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Ubuye waphumelela umdlali waseSweden wonyaka (2002 & 2006) kwaye yabekwa i-11th kwiGenners 'yabadlali be50 ababalaseleyo.
Emva kokuthatha umhlala-phantsi, uthando lukaLjungberg ngemfundo lwambona esenza imfundo apho wayegqwesa khona. Kwi-12 kaJulayi 2016, wajoyina iArsenal Academy eqeqesha iklabhu ye-Under-15s yeqela. Ubukrelekrele bukaLjungberg bumbona eqhubela phambili nomsebenzi wakhe wokuqeqesha kunye nomncedisi weVfL Wolfsburg (2017), U-U23 weArsenal kwaye ngokubalulekileyo, waba ngumqeqeshi wethutyana weArsenal kwi29th kaNovemba 2019. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Ukususela kunyaka we-2000, uFreddie waqala ukuba nobudlelwane kunye nokudibana kwamanenekazi. Phakathi kwe-2000 ukuya kwi-2008, wayesaziwa ukuba uneentombi ze-8 eyile; (1) I-Stephanie Saunders (2000), (2) UDenise Lopez (2002 - 2003), (3) Igolide yeLauren (2004 - 2005), (4) UMadeliene Lexander (2005), (5) U-Louisa Lytton (2006), (6) UGia Johnson (2007), (7) UJamie Gunns (2008) kunye (8) Unkulisa u-Nataliengoku unkosikazi wakhe ngexesha lokubhala).
UFreddie wayenobudlelwane kunye nokudibana kunye namanenekazi e-7 ngaphambi kokuhlala phantsi. Ityala: NGUBANI
UFreddie wadibana nothando lobomi bakhe uNatalie Foster (Hayi: 8) kwi2007, unyaka awashiya iArsenal eWestham. Intombi eyaba ngumfazi kamva ivela kwikhaya elinobutyebi. Ubusazi? U-Natalie uyintombazana yegosa elilawulayo kunye ne-tycoon Daryl Foster eyaziwayo yaseLondon. Kanye njengoFreddie, ukwanguye 'Nobuhlobo'-Uyaziwa kuluntu lwefashoni yaseBritane.
Emva kokulinda ixesha elide, ngelixa uthandana, ezi ntaka zimbini zathandanayo zagqiba kwelokuba zitshatele ngomhla we-9 kaJuni 2014, kumsitho owawuphambi kweMyuziyam yeNdalo eyaziwayo, eLondon.
Ifoto yomtshato kaFreddie Ljungberg no-Natalie Foster. Ityala: I-Instagram
Bobabini uFreddie noNatalie bamkele abantwana ababini uAria noBillie Ljungberg emva komtshato wabo.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi uFreddie Ljungberg buqu buza kukunceda ufumane umfanekiso olungcono wobuntu bakhe kude nebhola. I-Ljungberg ikhe yazonwabisa njengemodeli, umsebenzi awayewuthanda ngokudibanisa nebhola. Emva ngelo xesha, wamodareyitha zonke iintlobo zomzimba kunye nezangaphantsi kwiimpahla zokupholisa iimpahla uCalvin Klein.
Ubusazi?… Ukuba neempawu zomzimba; cool chiseled ABS, iishebones eziphakamileyo, kunye nokujongwa kokujonga kwenziwa ukuba abafazi abaninzi babe swoon kuyo yonke, isizathu sokuba wayenobudlelwane obuninzi ngexesha lakhe e-Arsenal. Ukuthetha ngamava amanenekazi ngeentsuku zakhe zokumodareyitha, uFreddie wakhe waxelela iphepha laseSweden u-Di (Ingxelo yeLanga);
Nangona kuvakala kumnandi kwaye nam, andiyi kuphinda ndikhale. Umzekelo ..., Xa ndisiya kwiiklabhu zasebusuku, amantombazana ayeza kubamba i-cr ** tch yam. Nje kanjalo!!!. Ewe! Yayisenzeka yonke indawo. Ngamanye amaxesha, babevela ngasemva, kwicala elitshiweyo kwaye bandihlasela. Elona candelo lakha lanzima kukuba andinakukwenza into egwetyiweyo ngalo. Xa bendisuka ndicaphukile izandla zabo, abantu bavele bahleka. "
Akumangalisi ke ngoko ukuba uFreddie aqwalaselwe njengeNgilane se * iest Ibhola ekhatywayo ngenxa yomsebenzi wakhe wokumodela owaziwayo.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Ukwazi indlela yokuphila kaFreddie Ljungberg kuya kukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo wenqanaba lakhe lokuphila. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Ljungberg isisityebi - ngethamsanqa eliqikelelwa ukuba lijikeleze i- £ 8m. I umntu opholileyo uyaziwa kuyo yonke iNorth London ngendlela yakhe yokuphila engaqhelekanga, umntu uphawuleka ngokulula ezimotweni zakhe.
Intsumpa ye-Arsenal ibonwe ngandlel 'ithile, iqhuba ukutyhutyha i-North London kwi-Ferrari 360 Spider, ethwala i-tag yexabiso lokujikeleza i- £ 85,000- £ 90,000. Uye wabonwa (ngonyaka u-2013) ehleli ebhuthini yeRange Rover yakhe ngelixa esitya iplate yokutya ecaleni kwenja yakhe, uAmadeus.
Abadlali bebhola ekhatywayo, njengabanye bethu, bayazithanda izilwanyana zethu zasekhaya kwaye uFreddie akayona le nto. Nokuba wena kukho intetho ethi akukho bunyani bushiyekileyo kumdlalo wale mihla, ngokuqinisekileyo ayithathi ingqalelo ubudlelwane ekwabelwana ngaye phakathi kukaFreddie nenja yakhe, uAmadeus. Lo mfanekiso ungezantsi ushwankathela indlela yokuphila kaFreddie. Uye walala nje emva kokubhiyozela omnye umhla wakhe wokuzalwa odlulileyo.
UFreddie Ljungberg ulele kwigadi yakhe entle ecaleni komhlobo wakhe osenyongweni- uAmadeus.
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
I-Freddie Ljungberg Tattoos: Ubusazi?… UFreddie wayephakathi kwesizukulwana sabathandi bebhola abaqala ukwamkela ubugcisa bomzimba kwii-90s kunye nee-2000 zokuqala. Emva koko, amaSweden ayathanda ukuqhwaya ikati yakhe emnyama kwikati yakhe ngelixa emodareyithwa nebhulukhwe. Le tattoo eyenzelwe eLos Angelos kuthiwa yathatha iiyure ezisibhozo ukugqiba. Njengoko kubonwe ngezantsi, unenye i-tattoo eyenzelweyo ebonisa inkolo yakhe (ubuKristu) engalweni yakhe.
Waye wakrokrela ukuba une-HIV-AIDS: Ngokujikeleze i-2005, uFreddie waqala ukungabikho kwimidlalo ebalulekileyo ngenxa yokulimala okuqhubekayo kwe-hip. Emva kokukrokrela ukuba unosulelo, wahlabela mgama wenza uvavanyo (kubandakanya intsholongwane kunye nomhlaza) ukufumana unobangela weengxaki zakhe. Ngothuswa, wafunyaniswa enesimo esinqabileyo kwesinye seetatoos. UFreddie wenza utyando lwe-hip ukususa i-gland evuthayo emzimbeni wakhe. Ngamazwi akhe ngokutsho ilanga;
“Ndandisoyika. Ndivavanywe ngocoselelo, kodwa kwakungekho mntu, ewe nam kwakubonakala ngathi ayazi ukuba yintoni ingxaki yam.
Bendixhalabile kakhulu. Khange ndizive ndigula okanye ndigula, kodwa kunjalo, ndiyazi ukuba ndonzakele ngaphakathi. Ekugqibeleni, oogqirha bafumanisa ukuba kukho into kwiitatoos zam. Ndihlaziyekile ukuba bayilungisa le ngxaki… ndiyaphila ngoku. ”
Isidlaliso sikaFreddie Ljungberg: Ubusazi?… Ngaphambi kokufudukela eqhubeka nebhola yakhe eNgilane, wayesaziwa njengo "UKarl Fredrik Ljungan ” kwaye HAYI “UFreddie Ljungberg". Nangona kunjalo, ngelixa wayedlalela iArsenal, wayenika igama lesidlaliso "UFreddie", Igama alifane lisetyenziswe eSweden.
Umdlali we-XBox: UFreddie ngumntu ekusenokwenzeka ukuba ubungazi ukuba ayingomdlalo weqonga. Kude kwibhola ekhatywayo, uyathanda ukuzibandakanya nomhlobo wakhe olungileyo URuud Gullit (owayengumphathi webhola leDatshi kwibhola ekhatywayo). Bobabini abahlobo abathandanga nto ngaphandle kokulahlekelwa yure ezimbalwa kwi-FIFA kwimidlalo ye-Xbox ngelixa belenga kwii-pubs.
IiRekhodi zeLizwe: Ubusazi?… I-Ljungberg yayingumdlali wokuqala ukufumana amanqaku kumdlalo wokugqibela weNdebe ye-FA ngaphandle kweNgilane. Ubuye waba ngumdlali wokuqala kwiminyaka ye-40 yokufumana amanqaku kwiMidlalo yeNdebe ye-C ngokulandelelana. Lilonke, ubamba iklabhu ye-9 kunye ne-16 imbeko nganye egama lakhe. Jonga imisebenzi yakhe yeembeko apha ngezantsi.
I-Freddie Ljungberg Club kunye neLungu eliHloniphekileyo. IiCredits: IWikipedia kunye neArsenalNews
I-Freddie Ljungberg Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
UFreddie akafane athethe malunga okanye abonise abazali bakhe okanye amalungu osapho kwimidiya. Yiyo loo nto kucingelwa ukuba utata wakhe kunye nomamakhe bahlala kwindawo edumileyo yaseHalmstad eSweden apho aqale khona ibhola. Ukusuka kwinto ebonakala ngathi, ikwavela onke amalungu osapho kubandakanya nomntakwabo Karl Oskar Filip Ljungberg onayo wenze ukhetho oluqinisekileyo lokungafunwa luluntu.
Okokugqibela xa iindaba zosapho zabamba usapho lwayo zazingaphezulu kweshumi leminyaka elidlulileyo, ixesha utata wakhe wangena engxakini. Ngokuchanekileyo kwi-19th kaJulayi, i-2008, utata kaFreddie Ljungberg watyholwa r * kwaye se * ual Ukuhlukunyezwa. Le yayisiqwenga seendaba ezimbi ezathi zichithe legend yaseArsenal (Ingxelo yeMirror 2008). URoy wabanjwa kwikhaya losapho eSweden kwaye wachitha ubusuku abathathu elugcinweni lwamapolisa eHalmstad ngaphambi kokuba akhululwe.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda iFreddie Ljungberg yethu Ibali loBuntwana kunye ne-Untold Biography Facts. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
Idilesi yebhola yaseSweden
Umhla oLungisiweyo: Agasti 15, 2019
I-Dimitri Payet Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Alexandre Lacazette yabantwana Ibali le-Untold Biography Facts
I-Sead Kolasinac Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Shkodran Mustafi yabantwana bebali kunye ne-Untold Biography Facts
I-Zlatan Ibrahimovic Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts